Gaas Oo La Kulmay Safiirka imaaraadka Carabta+Sawirro. – SBC
Gaas Oo La Kulmay Safiirka imaaraadka Carabta+Sawirro.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 18-5-2015 aqalka madaxtooyada Puntland ee Garoowe ku qaabilay Safiirka imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya Mohamed Al-Cutmani .
Kullan gaar ah oo Madaxweyne Gaas la qaatay Safiirka ayaa waxaa ku wehliyey Gudoomiyaha Baarlamaanka Dawladda Puntland Siciid Xassan Shire waxaana ay uga wada hadleen horumarinta xiriirka iskaashi iyo wax wada qabsi ee ka dhaxeeya Puntland iyo isutagga imaaraadka Carabta.
Shirka ayaa intii uu socday sidookale looga hadlay dardar gelinta mashaariicda horumarineed ee dawladda isutagga imaaraadka carabta ka fuliso guud ahaan Puntland, kuwaasi oo hada meel wanaagsan maraya.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa safiirka imaaraadka carabta u fadhiya Soomaaliya Mohamed Al-Cutmani iyo wefdiga uu hogaaminayo uga mahadceliyey booqashada ay ku yimaadeen Puntland, taasoo tusaale u ah in Puntland ay kajirto Nabad, kala dambeyn iyo horumar baahsan.
Ambassador Mohamed Al-Cuthmani ayaa isna dhankiisa ka mahadceliyay soo dhaweynta loogu sameeyay Puntland, isagoona sheegay in mar walba ay ka go’antahay sii wadida xiriirka wanagasan ee ka dhaxeeya labada Dawladood.
Dalka isutagga imaaraadka carabta ayaa Puntland ka taageera dhinacyo badan waxaana marba marka ka dambeeyana sii hagaagaya xiriirka ganacsi iyo midka diblumaasiyadeed ee ka dhaxeeya labada dawladood ee walaalaha ah .